မတ်လ ၁၃ – ဖုန်းမော်နှင့်စိုးနိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » မတ်လ ၁၃ – ဖုန်းမော်နှင့်စိုးနိုင်
မတ်လ ၁၃ – ဖုန်းမော်နှင့်စိုးနိုင်
Posted by kai on Mar 12, 2014 in Editor's Choice, History | 10 comments
ဖေ့ဘုတ်မှ စာများကို ကူးယူပါသည်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းကျန်ရစ်အောင်ပါ..။
၁၉၈၈ ခု မတ်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် အာဏာရှင်တို့၏ ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ပဉ္စမနှစ် ကျောင်းသား ဖုန်းမော် ကျဆုံးခဲ့သည်။ ပဉ္စမနှစ် ကျောင်းသား စိုးနိုင်သည် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ ကြောင့် ဧပြီလ (၅)ရက်နေ့တွင် ကျဆုံးခဲ့ပြန်သည်။
သတင်းကြေညာချက်များ၌ ဖုန်းမော်သည် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုမှ ရရှိသော ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုစဉ်က အာဏာရှင် အစိုးရသည် သတင်းအမှောင်ချ၍ သတင်းမှားကို ဖြန့် ဝေခြင်း ၊ သမိုင်းအချက်အလက်များအား တိမ်းစောင်းစေခြင်း စသည် တို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
တကယ်တမ်းပြောရမည်ဆိုလျှင်၊ စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ အာဇာနည်ကျောင်းသား ဖုန်းမော် နှင့် စိုးနိုင် တို့ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ၏ လူမဆန်သော လုပ်ရပ်ကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ခြင်းမှတစ်ဆင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား တော်လှန်သည့် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ စ ခဲ့သည်ဟုဆိုလျှင် မည်သူ ငြင်းနိုင်မည်နည်း။
ယင်းသည် မည်သည့်အခါမှ မေ့ပျောက် ဖျောက်ဖျက်၍ မရသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အရေးတော်ပုံမှတ်တမ်း သမိုင်းအချက်အလက်များပင် မဟုတ်ပါလော။ သမိုင်းအချက်အလက်၊ အဖြစ်အပျက် တို့ကို ဖျောက်ဖျက်ရန် ၊ သို့မဟုတ် တိမ်းစောင်းသွားစေရန် မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်းသူသည်သာ သမိုင်းတွင် သစ္စာဖောက်အဖြစ် ကျန်ရစ်မှေးမှိန်သွားမည်ဖြစ်၏။
ဖုန်းမော် ကျဆုံး ရခြင်း အဓိက အကြောင်းရင်းကို ဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ပါက ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူအများ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ မည်မျှ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေသည်၊ လူ့ အခွင့်အရေးများ ခံစားပိုင်ခွင့်မရှိသော အခြေအနေတွင် မည်မျှထိရှိနေသည် ဟူသော အကြောင်းအချက်များကြောင့် ဖြစ်သည်ကို ပြက်ပြက်ထင်ထင် မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။
သာဓက တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြရလျှင် ငွေစက္ကူများအား တစ်ကြိမ်မက အကြိမ်ကြိမ် တရားမ၀င် အဖြစ် ကြေညာခဲ့ခြင်းကြောင့် လက်လုပ်လက်စား ကျောင်းသား မိဘပြည်သူတို့ ပြာပုံကျ အတိဒုက္ခ ရောက်ခဲ့သည့် အဖြစ်ကိုပြရပေမည်။
ဖုန်းမော် ကျဆုံးဖြင်း တစ်နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပေးပို့သော ဂုဏ်ပြု အကြံပြုတိုက်တွန်းလွှာ၌ “ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများကို ပြည်သူလူထုက လိုလားတောင်းတနေသော ကြောင့် လည်း ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း လူတိုင်း လူ့ အခွင့်အရေးရှိသင့်သည် ဟူသော ခံယူချက်ပေါ်တွင် အခြေစိုက်သင့်သည် …” ဟူ၍ သ၀ဏ်လွှာတွင် ပါရှိပေသည်။
ဆက်လက်၍ “ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ လူတိုင်းနှင့် ဆိုင်သည့်အလျောက် ဖုန်းမော် ကျဆုံးသောနေ့ကို အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ (Human Rights Day) သဖွယ် သတ်မှတ်၍ ထိုနေ့၌ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့၏ လူမှုအခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ အဓိဋ္ဌာန်ပြုကြေညာ စာတမ်းတွင် ပါဝင်သောအချက်များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း၌
ဖြန့်ဝေ၍ ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်သင့်သည်။ “ ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းထားသည်။
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights) ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီး၌ နိုင်ငံစုံမှ လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုခဲ့ကြကြောင်း သိပြီး ဖြစ်မည်။ အပိုဒ်ပေါင်း (၃၀)ပါဝင်သော ယင်းကြေညာစာတမ်းထဲမှ အထင်ကရ အပိုဒ်အချို့အား ဖော်ပြပါမည်။
(၁) လူတိုင်းသည် မွေးဖွားလာကတည်းက ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တန်းတူညီမျှမှု ရှိသည်။
(၂) လူတိုင်းသည် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားရောင်၊ လိင်၊ ဘာသာစကား၊ အဆင့်အတန်း နှင့် အယူအဆ ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အရေးရရှိမှု တန်းတူညီမှု ရှိရမည်။ (၃) လူတိုင်းသည် အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် ၊ လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် လုံခြုံမှုရှိခွင့် ရှိရမည်။ (၄) မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မတရားနှိပ်စက်ခြင်း၊ လူမဆန်စွာ ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်း ပြုခွင့် မရှိရ။ (၅) တရားဥပဒေ ရှေ့မှောက်တွင် လူတိုင်းသည် လူသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံခွင့် ရှိသည်။ (၆) လူတိုင်းသည် တရားဥပဒေ၏ အကာအကွယ်အောက်တွင် တန်းတူညီမျှစွာ ရှိနေခွင့် ရှိသည်။ (၇) မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မတရားအဖမ်းဆီးခံခြင်း ၊ အချုပ်နှောင်ခံခြင်း၊ ပြည်နှင်ဒဏ် အပေးခံခြင်း မရှိစေရ။ (၈) လူတိုင်းသည် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်၊ ယုံကြည်၊ ဘာသာတရားကိုးကွယ်ခွင့် ရှိရမည်။ (၉) လူတိုင်းသည် အနှောက်အယှက် ကင်းပြီး လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် မီဒီယာများနှင့် သတင်းအပေးအယူ လုပ်ခွင့် ရှိရမည်။ (၁၀) လူတိုင်းသည် လွတ်လပ်သော ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ အဖွဲ့အစည်းတို့၌ ပါဝင်ခွင့် ရှိရမည်။ (၁၁) လူတိုင်းသည် ကျန်းမာရေး အစရှိသော လူမှုဘ၀အတွက် သင့်တင့်လုံလောက်သည့် အဆင့်အတန်းရှိ လူနေမှုဘ၀ကို နေထိုင်ခံစားခွင့် ရှိသည်။
ကျန်ရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၉)ပိုဒ်ကို မဖော်ပြတော့ပါ။ ချုပ်၍ပြောရလျှင် ၊ လူသားတိုင်းအဖို့ လူ့ဘ၀၌ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင်နေနိုင်ရန် သူ၏ ရပိုင်ခွင့်၊
ခံစားခွင့် စသည့် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနစ်နာခြင်း မဖြစ်သင့်..။
ချိုမြိန်သော သမိုင်းဟူသည် မရှိစကောင်းပေ။
အလွန် ခါးသီးသော သမိုင်းဖြစ်စဉ်များအား ခါးသီးပြင်းထန်စွာ ဖြတ်သန်းခံစားလာရသူတစ်ယောက်အဖို့ ထိုသမိုင်းဖြစ်စဉ်အား မေ့ပစ်ရန်ဆိုသည်မှာ မမျှော်လင့် စကောင်းပေ။ ထိုသို့ ပြုလိုက်မည်ဆိုပါက ခါးသီးသော သမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖန်တီးသူများအား အားပေးအားမြှောက် ပြုနေခြင်းနှင့် တူနေပေမည်။
ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဖုန်းမော်၊ စိုးနိုင် ကျဆုံးခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို သာမန်အားဖြင့် ရှုမြင်သုံးသပ်မည်ဆိုပါက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား လူငယ်တို့၏ မကျေနပ်ချက် ပေါက်ကွဲထွက်ခြင်းမှ ဖြစ်လာရခြင်းဟု သုံးသပ်ကြမည်။ တကယ်တမ်းမူ ထိုသို့မဟုတ်။ နှစ်ရှည် လ များ အဖိနှိပ်ခံ၊ လျစ်လျူရှုခံ ၊ လူ့အခွင့်အရေးများ အဆုံးရှုံးခံရခြင်း မီးပွါးမှ ကူးစက် လွင့်စဉ် ပေါက်ကွဲထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း ဖုန်းမော် မီးပွါးသည် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ကို အဟုန်ကြီးမားစွာဖြင့် တွန်းအားပေးဖြစ်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်ဟု မည်သူမျှ ကြိုတင်တွက်ဆခဲ့ကြမည်မဟုတ်ဟု စာရေးသူ ပြောချင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဖုန်းမော် သွေးမြေကျသောနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ “ လူ့ အခွင့်အရေးများ နေ့ “ ဟု သတ်မှတ်ပေးရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောလိုပါသည်။
ရေးသူ — တက္ကသိုလ် မိုးဝါ
၂၅ နှစ် by Soe Lynn
March 12, 2013 at 10:43am
မနေ့ (မတ်လ ၁၂ရက်) က ဘီပီအိုင် အ၀ိုင်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သီချင်းခွေဖွင့်ခိုင်းရာက စ စကားများ ကြပြီး ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားငယ်တွေကို အရပ်သားတွေက ရိုက်လိုက်ကြတယ်။ အရပ်သားတွေကိုခေါင်းဆောင်တာက ရပ်ကွက်ကောင်စီဥက္ကဌသား ညီညီလွင်။ အရိုက်ခံရတဲ့ ညီငယ်တွေက ကျောင်းထဲကိုလာပြောလို့ ညနေစောင်းမှာလူစုပြီး ကျောင်းသားကြီးတစ်ချို့ ညီညီလွင်အိမ်ကို သွားဝိုင်းကြတယ်။ (ကျော်လင်းနိုင်(ဂျော်နီ)နတ္တလင်း ပါမယ်ထင်တယ်) ဖြစ်ပျက်ပုံအသေးစိတ်ကိုမသိရပေမဲ့ ညီညီလွင်ကိုရှာမတွေ့ လို့ ကျောင်းသားတွေတော်တော်ဒေါသဖြစ်ကြတယ် ။ နောက်တော့ကျောင်းသားတွေ အဆောင်ပြန်လာခဲ့ကြပြီး အင်းစိန်ရဲစခန်းကနေ ညီညီလွင်ကို ဖမ်းသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ကြားရတယ်။ ဒါက မတ်လ (၁၂) ရက်ည နောက်ဆုံး အခြေအနေ။
တစ်စုတစ်ဝေးချီတက်လာကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့ အရပ်သားတွေ ဘီပီအိုင် အ၀ိုင်းမှာ ထိပ်တိုက်တိုးပါတယ်။ (အရပ်သားတွေဘက်ကလည်း ကျောင်းသားတွေ ရပ်ကွက်ကိုလာပြီးမီးရှို့မယ်သတင်းကြားလို့ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကိုကာကွယ်ဖို့ ခုလိုစုစည်းမိကြတယ် ဆိုတာကို နောက်ပိုင်းမှာ သတင်းပြန်ကြားခဲ့ရပါတယ်) နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆဲဆိုရင်း နီးစပ်ရာက တွေ့သမျှနဲ့ပစ်ပေါက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဘီပီအိုင်အ၀ိုင်းနားက သမ၀ါယမဆိုင် မီးစလောင်ပါတယ်။ (ကျောင်းသားတွေရှို့တာမဟုတ်ပါဘူး) ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့ မီးသတ်ကားကို ကျောင်းသားတွေခဲနဲ့ဝိုင်းထုလို့ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ်မီးသတ်ကားတွေလာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအများစု အမိကျောင်းဝန်းထဲကိုပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။ ဆရာတွေက ကျောင်းသားအားလုံးကိုယ့်အဆောင်ကိုယ်ပြန်နေဖို့နဲ့ မကြာခင်မှာတာဝန်ရှိသူတွေလာပြီး ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်း အော်ပြောနေပါတယ်။ မရှေးမနှောင်း သေနတ် ငါးချက်မိုးပေါ်ထောင်ဖေါက်ပြီး ခ၀ဲခြံဘက်ကနေ လုံထိန်းတပ်တွေဝင်လာပါတယ်။ အင်းစိန်လမ်းတစ်ဖက်မှာ အရပ်သားတွေ၊ အလယ်မှာလုံထိန်းတပ်၊ ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းအတွင်းကပ်လျှက်မှာ။ နောက်တော့ မီးသတ်ကားတစ်ချို့ကျောင်းဖက်လှည့်ပြီး ရေပက်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းသားတစ်ချို့ ရေပန်းအောက်မှာ မြနန္ဒာ သီချင်းဆိုရင်း ကခုန်နေကြတာကို ခုချိန်ထိမြင်ယောင်မိတုန်းပါပဲ။ (၀င်းမြင့်(ပေါငှား-မန္တလေး)ကထိပ်ဆုံးကပေါ့) မကြာပါဘူး ပစ်ခတ်သံတွေကြားရပြီး မီးခိုးလုံးတွေလည်း ပြန့်လာပါတယ်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးကို ပထမဆုံး ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်က မလှမ်းမကမ်းမှာ သန်းဝင်း (ကွယ်လွန်-မန္တလေး)အုန်းမြိုင်(မော်လမြိုင်)၊၀င်းနောင်(မြ၀တီ) နဲ့ လှမင်း(မန္တလေး)တို့ရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ လည်းလွတ်ရာကိုပြေးကြပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုနဲ့အတူ လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ကျောင်းထဲကို ထပ်ချပ်လိုက်ဝင်လာရင်း ပြေးရင်းလဲကျကျန်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို တစ်ခါတည်း ဖမ်းခေါ်သွားတာ နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်သိရပါတယ်။ (ကိုသန်းဝင်း – EP Final လည်းတစ်ယောက်အပါအ၀င်ပေါ့) လူတစ်ရပ်လောက်မြင့်တဲ့ ပန်းရုံကြီးတွေကို ဘယ်လိုကျော်လာမိမှန်း ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမရတော့ပါဘူး။ ပြေးလွှားရင်းနဲ့ ကျောင်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာ အများစုပြန်ဆုံကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ကျောင်းဆေးပေးခန်းမှာ ထိခိုက်ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာတွေ ဆေးထည့်ဖို့ရောက်နေကြတယ်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးကော၊ သေနတ်နဲ့ကောပစ်တာ ၊ ဘယ်သူ့မှန်သွားတယ်၊ ဘယ်လိုပြေးခဲ့ရတာ စသည်ဖြင့် ဆူညံနေပါတယ်။
သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံပို့လိုက်ရပါတယ်။ (ရက်မကြာမီ နောက်ကျောကိုမှန်တဲ့ကိုစိုးနိုင်က ဆေးရုံပေါ်မှာ ကျဆုံးခဲ့ပြီး ၀မ်းဗိုက်ကိုသေနတ်မှန်တဲ့ ကိုမြင့်ဦးကတော့ မသေခဲ့ပါဘူး) ကိုဖုန်းမော်ကို မရင်နှီးပေမဲ့ ကိုစိုးနိုင် (ပုသိမ်) နဲ့ကတော့ ပထမနှစ်စတက်ကတည်းက Section – B မှာ အတူ နေလာခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ မှတ်မိသလောက် Section – B မှာအတူနေခဲ့ကြတဲ့ မန္တလေးသားတွေကတော့ သန်းဝင်း(ကွယ်လွန်)၊ လှမင်း၊ စိုးမြင့်အောင်၊ ဇော်လင်း(ယခုစင်္ကာပူ)၊ ဇော်လင်းမြင့်၊ ၀င်းနိုင်(ဇော်မင်းလေး)၊ သန်းစိုး စသဖြင့် ပါပဲ။ ကိုစိုးနိုင်က အနေအထိုင်အေးဆေးပြီး သူ့ရုပ်ရည်က ချားလ် မင်းသားနဲ့ တော်တော်ဆင်ပါတယ်။ ကိုမြင့်ဦးနဲ့ကတော့ ကျောင်းမှာမျက်မှန်းတန်းမိပြီးသားပါ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ထဲ ရန်ကုန်ပါတီရုံးခန်းတစ်ခုမှာ ဆုံပြီးတဲ့နောက် ခုချိန်ထိ ကိုမြင့်ဦးနဲ့ ပြန်မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး ။ ကုမ္မဏီ တစ်ခုမှာ
အလုပ်ဝင်နေတယ် လို့တော့ သတင်းကြားရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဆောင် -၁ အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ စုရုံးပြီး ခေါင်းဆောင်တွေရွေးကြပါတယ်.။ ခေါင်းဆောင် ၁၀ ဦးရွေးကြပြီး အများစုက ကျောင်းမှာ နာမည်ပြောင်နဲ့ လူသိများတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုးအောင် (ချီးပေ)၊ ကိုအောင်မြင့်ဇော်ဦး (ကြက်ဥ)တို့ကိုတော့မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့် ပထမနှစ်အခန်းဖေါ် ကိုတိုးဦးဇော် (မော်လမြိုင်-ယခု စင်္ကာပူ) ပါမပါကိုတော့ မသဲကွဲတော့ပါဘူး။ ကိုဖုန်းမော်အတွက် အထိန်းအမှတ်ကြယ်ကို အဆောင် – ၁ အောက်မှာပဲ တခန်းတနားလုပ်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ ကျောင်းထဲမှာတစ်ပါတ် လှည့်လည်ပြီး ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ မနက်ခင်းလိုက်ကြည့်တော့ ကျောင်းဝန်းထဲက သစ်ပင်တစ်ချို့မှာ ကျည်ဆံရာတွေတွေ့ရပါတယ်။ ဆင်းရဲသား ဂိတ်ပေါက်အ၀င် မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ “လေသေနတ်မပစ်ရ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကတော့ လမ်းဘေးမြက်ခင်းပေါ်မှာ လဲကျနေရှာလေရဲ့။
အစိုးရ ရေဒီယို၊သတင်းစာတွေက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်တွေမှာ အဖြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး သူတို့လိုရာကို ဆွဲရေးကြပါတယ်။ အရင်က အစိုးရပြောရင် အားလုံးအမှန်ပဲလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တာပါ။ အခုမှပဲ အစိုးရဆိုတာမျိုးကလည်း လိမ်တတ်သကိုးလို့ ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မတ်လ (၁၄)ရက်ညရောက်လာပါတယ်။ အဆောင်တွေမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားအားလုံး စားသောက်ဆိုင်တန်းနှစ်ခုကြားက မြေကွက်လပ်မှာ စုရုံးကြပါတယ်။ ပိုမိုကျစ်လစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ရွေးချယ်ဖို့နဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး မတရာဖိနှိပ်မှုတွေကို စနစ်တကျတွန်းလှန်သွားကြဖို့ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်သူများ မိမိကိုယ်ကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆန္ဒပြုဖို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး ခေါင်းဆောင် အသစ်သုံးဦးရွေးချယ်ကြပါတယ်။ (အဲ့ဒီအချိန်မှာ အရင်နေ့ကရွေးခဲ့တဲ့ ဆယ်ဦးကော်မတီ မရှိတော့ပါဘူး) နံပါတ်တစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုဝင်းမြင့်(မန္တလေး) နံပါတ်နှစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုနေမျိုးအောင်(ဂျင်ဘရောင်း – မန္တလေး)နဲ့နံပါတ်သုံးခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုထွန်းမြင့် (မိတ္ထီလာ) တို့ကိုရွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းလုံခြုံရေးအတွက် အခန်းနီးချင်းအလိုက် အဖွဲ့ငယ်လေးတွေဖွဲ့ပြီး တာဝန်ယူကြဖို့လည်း ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကို စစ်တပ်က အဖက်ဖက်ကနေ၀န်းရံပိတ်ဆို့ထားပါပြီ။ ၁၅ ရက်နေ့မနက်မှာတော့ ကိုလှမင်း ၊ ကိုမောင်မောင်လွင်၊ ကိုမောင်ကို၊ကိုခိုင်မျိုးသန့် (ဖေါ်ပင်)၊ကိုမျိုးသန့် ၊ကိုမိုးကျော်ဦး(အားလုံးမန္တလေး)၊ကိုမြင့်ဦး(မိုးကုက်) နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်လမ်းကြားကလေးတွေကနေတစ်ဆင့် ကျောင်းဝန်းထဲက ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းကို သူပုန်စခန်းဝင်စီးသလို တပ်ကစီးတာကို မသိလိုက်ရပါဘူး ။ သူငယ်ချင်းတွေပြောမှပဲ ကျောင်းသားတွေကို အဆောင်တွေထဲကဆင်းလာခိုင်း၊ လက်ကလေးတွေခေါင်းပေါ်တင်ပြီး ထိုင်ခိုင်းတာ၊ ကျောင်းရဲ့ဂုဏ်ကိုမထောက် ဆဲဆိုငေါက်ငန်းတာ မျိုးလုပ်ကြတယ်လို့ ပြန်သိရပါတယ်။
ဘာလိုလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်းအစိတ် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မတ်လ (၁၃) ရက်ဟာ ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဘာမှမသိ၊ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဘ၀ကနေ သမိုင်းကိုသိဖို့ ၊မျက်မှောက်ခေတ်ကို မျက်ခြေမပြတ်ဖို့၊ သမိုင်းတာဝန်ကို တတ်နိုင်သမျှထမ်းဖို့ သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို ၁၈၀ ဒီဂရီ လှည့်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ နေ့လည်းဖြ့စ်တယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရပြောရရင် ခေတ်အဆက်ဆက် တိုက်ပွဲဝင်ကျောင်းသားအပေါင်းရဲ့ မီးရူးတိုင်ကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ နေ့ဖြစ်တယ်။ နောင်တော်ကျောင်းသားကြီးတွေရဲ့အမွေကို မျိုးဆက်တစ်ခုက ဆက်ခံလိုက်ကြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ ဆဲဗင်းဂျူလိုင၊် ဦးသန့်အရေးအခင်း၊ မှိုင်းရာပြည့်တို့က ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ လှိုင်းလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။
*ရန်ကုန်ကို ကိုင်လှုပ်သောထို (၇) ရက်*
မွန်းလွဲ တစ်နာရီတွင် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ချစ်ဆွေက ကျောင်းသားများကို ပြေရာပြေကြောင်း မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဏာပိုင် တစ်ဦးက ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက် များကို ပရိယာယ် ကြွယ်ဝစွာဖြင့် မေးမြန်းသော အခါ လူအုပ်ကြီးက “ဖက်ဆစ် အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး —ဒို့အရေး— ဒို့အရေး” ဟူ၍ သံပြိုင် ကြွေးကြော် ခဲ့ကြသည်။ တွန့်ဆုတ်သွားသော ဒေါက်တာ ချစ်ဆွေက ကျောင်းသားများအား “ကျောင်းဝင်း ထဲက မထွက်ရင် ဘာမှ မဖြစ်စေရဘူး” ဟု အာမခံချက် ပေးပြန် သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ အဆောင်တွေဘက်ကို ချီတက် ကြတယ်။ အမရ၊ တောင်ငူ၊ မန္တလေး အို… အဆောင်စုံပါဘဲ။ ‘ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး —ဒို့အရေး’ ‘ တစ်ပါတီ စနစ် — ကျဆုံးပါစေ’ ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေဟာ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကို ပဲ့တင် ထပ်စေခဲ့သည်။ ကျောင်းဆောင် ထဲက ကျောင်းသားတွေ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် ထွက်လာကြပြီး ဆန
ထွန်းဦးက ဆက်၍ ပြောသည်မှာ –
လူသတ်ပွဲများ တစ်နာရီခန့် ကြာသွားသည်။ လမ်းမ တစ်လျှောက် သွေးအိုင် များတွင် တုံးလုံးပက်လက် လဲ နေသော အလောင်းများမှာ ဖရိုဖရဲ ဖြင့် ပြန့်ကျဲလျက် ရှိသည်။ ‘တံတားဖြူ’ သည် လည်း မဖြူနိုင်တော့။ တံတားနီ ဘဝသို့ ရုတ်ခြည်း ကူးပြောင်း သွားခဲ့ရသည်။
( ထိုတစ်ည ၏ တဒင်္ဂ – ၁ )
ရောင်စုံမီးတန်းများ တရွှီးရွှီး ဖြတ်သန်းနေကြသည်၊
ဤမြင်ကွင်းသည်ကား ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ည ၁ နာရီ အချိန်
တရွှီးရွှီး ဖြတ်သန်းနေသော ရောင်စုံမီးတန်းများ သည်ကား
လုံထိမ်းများမှ ပစ်လိုက်သော သေနတ်ကျည်ဆံများပင်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားအများစုမှာ ပင်မဆောင်အောက်တွင် ပြန်လည်စုစည်းမိကြပြီး
ကျနော်အပါအဝင် တစ်ဦးတစ်လေသာ ကျောင်းရှေ့ပန်းခြံထဲတွင်ကျန်ရစ်သည်၊
ကျနော်သည် ဝမ်းလျားမှောက်သွားနေရာမှ အဝိုင်းပတ်လမ်းအပြင်ဘက်ထောင့်ရှိ
စိန်ပန်းပင်ကို အကာအကွယ်ယူ၍ ထိုင်လိုက်သည်၊
မကြာခင်ကထိုးသွားသော မီး သတ်ပိုက်များကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး စုတ်ပြတ်ပေလူးနေသော်လည်း
ထိုအချိန်တွင် ကျောမှီထားသော စိန်ပန်းပင်ကို တဖောင်းဖောင်းလာမှန်နေသော ကျည်ဆံများကိုခံစားနေရသည်။ မိမိတို့ ကိုပစ်မှတ်ထားနေကြပြီ။ လွတ်လမ်းတော့မမြင်ပြီ။
ထိုသို့ လည်းမဖြစ်ချေ ၊ သေနတ်မမှန် နိုင်သော်လည်းလှံစွပ်ဖျားတွင်ကားကနဲပါသွားမည်။
( ထိုတစ်ည ၏ တဒင်္ဂ – ၂ )
( ထူးချွန်ထက်မြက်သလောက် ဉာဏ်ရွှင်သော၊ နှစ်လိုဘွယ်ကောင်း၍ရယ်ပွဲဖွဲ့တတ်သော၊
အချင်းချင်း မိသားစုထက်ပင် ပို၍ချစ်ကြသော၊ မတရားဟုထင်လျှင် စိုးစဉ်းမျှ ငုံ့မခံတတ်သော
အနာဂတ်၏ကြယ်ပွင့်များဖြစ်ကြသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ပျော်မြူးရာ
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ရှေ့ မြက်ခင်းပြင်သည် ထိုညက စစ်တလင်းပြင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ )
လုံထိန်းများ ခြံစည်းရိုး ကျော်ဝင်လာနေသည်ကို မြင်ရသည်။
အသက်ကိုညာဏ်စောင့်သည် ၊ ဤနေရာမှခွာမှဖြစ်မည်။
ရှေ့ တွင်ကွန်ကရစ်လမ်းခံနေသဖြင့် ၀မ်းလျှားမှောက်ဆက်သွားလျှင်
ငယ်ရွယ်မှု၊ သန်မာမှု ၊ လျှင်မြန်ဖြတ်လတ်မှု အားလုံးကိုအသုံးချလျှက် ကွန်ကရစ်လမ်းကို
ခြေဖျားဖြင့် တစ်ချက်ထောက်ကာ ပန်းခြံအ၀ိုင်းထဲသို့ ဒိုင်ပင်ပစ်ဝင်လိုက်သည်။
လေထဲတွင်အလျားလိုက် ရှိစဉ်မှာပင် နောက်ကျောဘက်မှ ပူကနဲဖြစ်သွားပြီး၊
ရင်ထဲမှာစူးအောင့်သောဝေဒနာ ခံစားလျှက် မြေပြင်ပေါ်သို့ ပစ်ကျသွားသည်။
မိမိကို ကျည်ဆံမှန်ပြ၊ီ သေရတော့မည်။
ဘုရားသခင်ကို အာရုံ ပြုလိုက်သည်။
တစ်ခဏ အကြာ မိမိရင်ဘက်သို့ ပွတ်သတ်ကြည့်သည်။
ဒဏ်ရာမရှိ ၊ ရင်သို့ ပွင့်မထွက်ခဲ့ ၊ သို့ ဆိုလျှင်မသေနိုင်သေး။
တစ်ချိန်ထဲမှာပင် ဘယ်ဘက်မျက်ဝန်းတောင့်ဆီမှ ကျောင်းသားတစ်ယောက်
ကားခနဲ ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်သို့ လဲကျသွားသည်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ မထနိုင်တော့ ။
(ကိုဖုန်းမော် ဟု နောင်တွင်သိရသည်)
ငါတို့ ကိုမှန်ပြီဟေ့ ဟု အသံကုန်ဟစ်လျှက်
ပင်မဆောင်ဘက်သို့ လေးဘက်တွားပြေးလာခဲ့ သည်။
အဖြစ်အပျက်အလုံးဆုံကို မြင်ခဲ့ကြသော ပင်မဆောင်အောက်မှ ကျောင်းသားတချို့ ပြေးဆင်းလာသည်။
အချို့ က မိမိကိုဆွဲ၍ အချို့ က ဖုန်းမော်ကို ပြေးဆွဲကြသည်။
မိမိကို ပင်မဆောင် နာရီကြီးအောက်တွင်ချ၍ ကိုဖုန်းမော် ကို အလည်ရှိ မီးချောင်းအောက်တွင်ချလိုက်ကြသည်။
ကျောင်းသားတို့ ငိုယိုသံ၊အော်ဟစ်သံတို့ ဖြင့်ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသည်။
ကျောင်းသားတို့ မည်မျှခံစားနေရပြီကို စာဖတ်သူတို့နားလည်သိရှိနိုင်သည်။
“ ငါတို့ ကျောင်းသားတွေ သေကုန်ပြီ ”
အချို့ ကနံရံကို ခေါင်းဖြင့် ပြေးဆောင့်ကြသည်။
အချို့ က ငိုယိုလျှက် နံရံများ တိုင်များကိုလက်သီးဖြင့် ထိုး၊ ခြေဖြင့်ကျောက်၊
ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်သည့်အလျှောက် အတွေ့ အကြုံ လည်းမရှိ
ရှေးဦးသူနာပြုလည်း နားမလည် ၊ ၀ိုင်အုံကြည့်လျှက် မင်သက်နေကြသည်။
တစ်ကိုယ်လုံးသွေးများ ပေလူးလျှက် ၊ မလှုပ်မရှက် ၊ ဒဏ်ရာရှာဖို့ ပင်မလွယ်။
နာကျင်နေသည့်ကြားမှ မိမိကျည်ဆံမှန်ထားသော နေရာကိုစမ်းသည်။ တွေ့ ပြီ။
ထိုစဉ်က ဗဟုသုတဖြင့် ဒဏ်ရာထဲသို့ လေ၀င်သွားလျှင် သေမည် ဟုတွေးမိသည်။
‘ငါ့ဒဏ်ရာကို ပိတ်ပေးပါ လေ၀င်ရင် သေလိမ့်မယ်’
‘ မတွေ့ ဘူး ရှပ်မှန်တာ ဖြစ်မယ်’
‘မဟုတ်ဘူး ကျည်ဆံက ငါ့ ရင်ထဲမှာ ၊ အောင့်နေတယ်’ ဟုပြောလိုက်သည်
ထိုကျောင်းသားကပင် ထပ်မံစမ်းသပ်ရာ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းလုံး ၀င်သွားသည်။
‘အား’ ကနဲ အော်ကာထွက်ပြေးသွားတော့သည်။
မိမိအင်္ကျီစကိုလိပ်၍ ကိုယ့်ဖာသာပင် ဒဏ်ရာထဲသို့ ထိုးသွင်းရသည်။
ထိုအချိန် ဆရာများအနားသို့ ရောက်လာသည်။
ကိုဖုန်းမော်မှာ သုံးချက်မှန်သည်။ ဒဏ်ရာပြင်းသည်။
အသက်ငွေ့ ငွေ့ သာရှုတော့သည်။
ငါ့ တို့ ကျောင်းသားတွေ အသေမခံနိုင်ဘူးဆေးရုံ ပို့ ရမယ်။ ပြောလျှက် ၊
ကိုဖုန်းမော်ကို Electrical မှ ဆရာဦးစိန်အေး (၁၉၈၈ လှည်းတန်းတွင် ကျဆုံး) နှင့်
အခြား ဆရာတစ်ဦးကထမ်းသည်။ ရူပဗေဒ ဌါနမှူးဦးသာလှိုင်နှင့် 
စက်မှုမှ ဆရာဦးအက်စ်ကျော်အေး တို့ ကမိမိကို ထမ်းလျှက်
ကျောင်းပြင်ပသို့ ထိုးထွက်ကြရာ လုံထိန်းများ၏အရိုက်ကို ခံရတော့သည်။
ကျနော်တို့ ဆရာတွေပါ ကျောင်းသားတွေ ဆေးရုံပို့ ချင်လို့ ဟုပြောသည်။
တစ်ခဏ ဆွေးနွေးပြီးနောက် ၊ လုံထိန်းကားတစ်စီးဖြင့် မိမိတို့ ကိုတင်လျှက် ကားထွက်သည်။
မကြာမီ ခ၀ဲခြံ မှတ်တိုင်ခန့် အရောက်တွင် ဆရာများဆီမှ ရှိုက်သံ ထွက်လာသည်။
” ဒီကလေး အသက်မရှုတော့ဘူး ”
ဖုန်းမော်အရေးအခင်း အကြောင်း တစေ့တစောင်း ။ အပိုင်း ( ၁ )
March 7, 2014 at 1:53am
အခုလို မတ်လ ဖုန်းမော် အရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည်နား နီးလာတော့ ကိုယ်တွေ.ကြုံခဲ့ရ ၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ ဖုန်းမော် အရေးအခင်း အကြောင်း ကို သေသေချာချာ မသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေ သိရအောင် ရယ်…သိပြီးသား လူတွေ လဲ ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိသွားအောင်ရယ် ဖုန်းမော်အရေးအခင်း ကို အာအိုင်တီ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ. ကိုယ်တိုင်ထိတွေ.ပတ်သက်ခဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ.ပြောပြ ချင်စိတ် ဖြစ်လာလို. ဒီစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်…။
အနောက်ကြို.ကုန်း ၊ ဆေးဝါးစက်ရုံလမ်း ( ဘီပီအိုင်လမ်း ) ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စန္ဒာဝင်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင် မှာ သီချင်းဖွင့်တဲ့ ကိစ္စ နဲ.ပတ်သက်ပြီး အာအိုင်တီကျောင်းသားတချို. နဲ. အဲဒီရပ်ကွက် ထဲ မှာနေတဲ့ လူငယ်တချို. စကားများ ရန်ဖြစ်ရာကနေ ရပ်ကွက်လူငယ်တွေက ခုံနဲ.ရိုက်လိုက်လို. အာအိုင်တီ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ခေါင်းကွဲ သွားရာက ဇာတ်လမ်းစပါတယ်…။ ခေါင်းကွဲ သွားတဲ့ အာအိုင်တီကျောင်းသား နဲ. သူငယ်ချင်းတွေ ဟာ ခုံနဲ. ရိုက်ခဲ့တဲ့ သူကို အရေးယူပေးဖို. အင်းစိန်ရဲစခန်းမှာ သွားရောက်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်….ခုံနဲ. ရိုက်ခဲ့တဲ့သူဟာ အဲဒီရပ်ကွက်ကောင်စီဥက္ကဌ ရဲ.တူဖြစ်နေတော့ ရဲစခန်းက မဖမ်းပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို. သိရပါတယ်….အဲလို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို. သတင်းကြားရတဲ့အခါ ခေါင်းကွဲတဲ့ ကျောင်းသားနဲ. သူငယ်ချင်းတစ်စု က မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး တခြားသူငယ်ချင်းတွေပါ ထပ်စုပြီး ရပ်ကွက်ထဲ မှာ သူတို.ကို ရိုက်ခဲ့တဲ့ တရားခံ ကို သွားရှာကြပါတယ်…အဲဒီ လို သွားရှာတဲ့အခါ ရပ်ကွက်လူငယ်တွေက စုပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်ပါတယ်…ကျောင်းသားအဖွဲ.က လူနည်းစုဖြစ်တော့ အလူးအလဲ ခံရပြီး ပြန်ထွက်ပြေးလာရပါတယ်…အဲလို ထွက်ပြေးလာတုန်း ကျောင်းသားအဖွဲ.ထဲက တစ်ယောက် ဟာ လဲကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်… အဲဒီလို လဲကျကျန်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ကို စိတ်ပူပေမယ့်လဲ..အာအိုင်တီ ကျောင်းသားအဖွဲ. က သူတို.ကိုယ်တိုင်လဲ သူတို.ချည်းသပ်သပ် ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်သွားမရှာရဲတော့တဲ့ အတွက် ကြို.ကုန်းဆောင်တွေ မှာ နေတဲ့ အာအိုင်တီက အတန်းကြီး အကိုကြီးတွေ ဆီ အကူအညီ သွားတောင်းကြပါတယ်…။
ကျွန်တော်တို.ခေတ်တုံးက အဆောင်ကျောင်းသားတွေ ဟာ မိဝေးဖဝေး မှာ ရပ်တည်နေထိုင် ကြရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်စည်းလုံး ကြပါတယ်..။ တစ်ယောက်ယောက် ဒုက္ခရောက် တယ်ကြားရင် ကိုယ်နဲ. သိသိ မသိသိ ကျောင်းသားစိတ်နဲ. ၀ိုင်းကြ၀န်းကြတာပါပဲ..။ အခု ပြဿနာ မှာလဲ အဲလိုပါပဲ..။ ကိုယ့်ဆီက ကျောင်းသားတစ်ယောက် သေလားရှင်လားမသိ ရန်ဖြစ်ပြီးသူများတွေ လက်ထဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဆိုတော့ အားလုံး ထလိုက်ကြတာပေါ့ ..တဆင့်စကားတဆင့်နား နဲ. သိကြပြီး ကြို.ကုန်းဆောင် များဖြစ်တဲ့ A,B,C,D,E,F အဆောင် ( ၆ ) ဆောင်ရှိ ကျောင်းသားတွေ အကုန် နီးပါး ဆင်းလိုက် သွားကြပါတယ်…. ကျောင်းသားတွေ အုပ်စုလိုက် ချီတက်လာတာလဲ တွေ.ရော ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေ ပြေးတော့တာပေါ့….အဲဒါ နဲ. ရပ်ကွက် ကောင်စီ ရုံးကို သွားဝိုင်းပြီး တရားခံ ကို ထုတ်ပေးဖို. တောင်းဆိုတာပေါ့…ရပ်ကွက်ကောင်စီ ရုံးကလဲ ပိတ်ထားပြီး ဘယ်သူမှလာမဖြေရှင်းပေးတော့ ဒေါသ ထွက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ရပ်ကွက်ရုံးကို ခဲနဲ့ ပေါက်ကြပါတယ်…. အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဘတ်ဂျက်ပိတ်ခါနီး စာရင်းဖျောက်ဖို. ကြံနေတဲ့ သမ၀ါယမ ဆိုင်က ရောင်ပြန်တော် နဲ.ရောလွှတ်ပြီး မီးရှို.ခံရပါတယ်…ကျောင်းသားတွေ ရှို.တာ မဟုတ်ပါဘူး…စာရင်းဖျောက်ချင်တဲ့သူက ရှို.တာပါ…ဒါပေမယ့်..ကျောင်းသားတွေ က ရပ်ကွက်ထဲ မှာ စုရုံးပြီးရောက်နေတဲ့ အချိန် ဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေ ရှို.တယ် ဆိုပြီး လုပ်တော့တာပေါ့……အဲဒီ အချိန်မှာ ဦးနေ၀င်း ရဲ. မဆလ အစိုးရက နိုင်ငံအခြေအနေ အကြပ်အတည်းတွေအတွက် ရန်ကုန် ပြည်လမ်း မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်ဝင်းထဲ မှာ အရေးပေါ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးလုပ်နေ ကြပါတယ်….၁၉၈၇-ခုနှစ် ငွေစက္ကူတွေ ကို တရားမ၀င်ကြေငြာခဲ့တုန်းက လဲ အစိုးရကို စတင် ကန်.ကွက်ခဲ့တာ အာအိုင်တီ ကျောင်းသား တွေပါ….အဲဒီတော့ ဦးနေ၀င်း အစိုးရဟာ အာအိုင်တီကျောင်းသားတွေ ကို မျက်မုန်းကျိုးနေပါတယ်….အခု အနောက်ကြို.ကုန်းထဲ မှာ ကျောင်းသားတွေက ရပ်ကွက်ကောင်စီရုံးကို ၀ိုင်းထား…သမဆိုင်ကလဲ မီးလောင် ဆိုတော့… ဦးနေ၀င်းက အာအိုင်တီက ကောင်တွေ အစိုးရကို ဆန်.ကျင်ပြီး ဆူပြန်ပြီ..လို.ထင်သွားပုံရတယ်.. TE-11 ကားနဲ. သုံးစီး တိုက် စစ်သားတွေ ပို.လိုက်တယ်….ပစ်မိန်.ပါတခါတည်းပေးလိုက်ပုံပဲ….
စစ်ကားတွေရောက်လာချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေက အနောက်ကြို.ကုန်းရပ်ကွက်ထဲ မှာမရှိတော့ဘူး …အာအိုင်တီကျောင်းဝင်းထဲ ပြန်ရောက်နေကြပြီ…တိုင်အမြင့်ကြီးတွေ နဲ. ပင်မအဆောင်ကြီး အောက်မှာ ကျောင်းရှေ. မှာ အချင်းချင်း စုပြီး အတွေ.အကြုံတွေ ပြန်ပြောနေကြတာ…ဆရာတွေလည်းရောက်လာပြီး မေးမြန်းနေလို.ရှင်းပြနေကြတာ…အေးအေးဆေးဆေးပဲ…..အဲဒီ စစ်ကားတွေ ရောက်လာပြီး..ဘာမပြောညာမပြော ပစ်တော့တာပဲ…… ကျောင်းသားတွေ လဲ ၀ရုန်းသုန်းကား ပြေးကြရတာပေါ့…အဲဒီလို ပစ်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းမော် ကို မှန်သွားတာပဲ….ဖုန်းမော်က အဆောင်နေကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး…Day ကျောင်းသား အဲဒီနေ.ကမှ ကိစ္စရှိလို. အဆောင်က သူငယ်ချင်းဆီရောက်နေရင်း သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လို. ကျောင်းသားချင်းဆိုတဲ့ စိတ်နဲ. ပါသွားတာ….
သေနတ်ကျည်မှန်ထားတဲ့ ဖုန်းမော် ကို သူငယ်ချင်းတွေက ကျောင်းဝင်းအပြင်က လှမ်းပစ်ရင် မထိနိုင်တဲ့ ပင်မဆောင် အတွင်းပိုင်း သြဘာလမ်းထပ်နားအထိခေါ်လာပြီး သူ.အင်္ကျီကိုချွတ်လို. ဒဏ်ရာ ကိုပြုစုဖို. ကြိုးစားကြတယ်…ဒဏ်ရာကပြင်းထန် ၊ ဆေးဝါးကမရှိဆိုတော့ ဖုန်းမော်လဲ ခဏအတွင်း ဆုံးပါးသွားရရှာတယ်…ခဏနေကြတော့ စစ်သားတွေ ကျောင်းဝင်းထဲအထိဝင်လာပြီး လိုက်ဖမ်းလို. ဖုန်းမော်ကို မသယ်နိုင်ပဲ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းဝင်းအတွင်းပိုင်းအထိ ထွက်ပြေးကြရတယ်…အဲဒီ မှာ စစ်တပ်ကလည်း ဖုန်းမော်ရဲ.အလောင်းကို သယ်ထုတ်သွားကြတယ်…အမှန်ကတော့ သူတို.သေနတ်နဲ. ပစ်သတ်လို. ကျောင်းသားသေတယ်ဆိုတာကို အစဖျောက်ဖို. ကြိုးစားတာပါ…..
( အပိုင်း-၂ ဆက်ရန် )
သဂျီးရေ မေ့ကောင်းစရာ အတိတ်ရယ်လို့ မမှတ်ယူလေနဲ့ကွယ် သွေ့ပြောင်းကာဟောင်း ဟောင်းခဲ့လည်း။
၂၃ နှစ်ဆိုတော့ ငယ်ငယ် အရွယ်ကောင်းတုန်းလေး
ဒီ အတိတ်ကို တံဆိပ်တစ်ခု တပ်သင့်ပါကြောင်းး
ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူတွေရဲ့စာကို ဖတ်ရတာ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ :'(
အခုလို မသိမမှီလိုက်သူ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ သမိုင်းဖြစ်မှန်သိအောင်
ရှာဖွေစုစည်းတင်ပြပေးတာ…သဂျီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…အဲ့ အချိန်က ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်
ငွေတွေသိမ်းတော့ အစိုးရအလုပ်ဝင်စ…လခက ရှားပါးစရိတ်နဲ့မှ ၃၈၀ကျပ်ပဲထုတ်ရတယ်…
၂၅ ၃၅ ၇၅ တွေသိမ်းတော့ ကျုပ်လက်ထဲကလက်ကျန် အစိတ်တန်အသစ်လေးတစ်ရွက်မိသွားတာ
နည်းနည်းလေးစီလွဲနေကြတာမှာ… ကိုမြင့်ဦး(Komyintoo Bemo
( ထိုတစ်ည ၏ တဒင်္ဂ – ၁ )ရေးတာအမှန်ဆုံးလို့..ခန့်မှန်းမိတယ်..။
သူက.. ကိုယ်တိုင်ကျည်ဆံထိပြီး.. အခုထိမသေပဲကျန်ရစ်သူပေါ့..။
မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ကျောင်းသားအရေးအခင်း (သို့ ) ကိုဖုန်းမော်နေ့(သို့ ) မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့သမိုင်းကြောင်း။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး စတင်ပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လဆန်းမှာ အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေရဲ့မတရားလုပ်ရပ်ကြောင့် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခဲ့ရမှုနှင့် မတရားမှုကို အစဉ်အမြဲ ဆန့် ကျင်တော်လှန်ရဲတဲ့ ကျောင်းသားတို့ ၏ အာဏာရှင်အား စိန်ခေါ်မှု မှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်အား ရဲရဲဝန့် ဝန့် ရင်ဆိုင်ပြီး ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ကာ ကျဆုံးခဲ့ကြသော စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်နှင့် ကျောင်းသားအပေါင်းအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အဆိုပါ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ အား မြန်မာနိုင်ငံလူ့ အခွင့်အရေးနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့အချိန်ကာလမတိုင်ခင် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်မှုများကတော့ –
၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၅) ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ၂၅ ကျပ်တန် ၃၅ ကျပ်တန် နဲ့ ၇၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူတွေကို တရားမ၀င် ဖျက်သိမ်းပါတယ်လို့ အာဏာရှင် နေ၀င်းဦးဆောင်တဲ့ မဆလအစိုးရက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ယခုပိုက်ဆံသိမ်းတာ မတိုင်ခင် အရင်က သိမ်းခဲ့တဲ့ ၁၀၀ တန် (ခေါင်းပေါင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်) တွေ သိမ်းတုန်းကလိုမျိုး ပြန်လဲပေးမလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ လူတွေ စောင့်မျှော်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို လိုက်ဝယ်တဲ့ သူတွေကလည်း ဖျက်သိမ်းပြီးသား ငွေစက္ကူတွေကို အရေးတကြီး ငွေလိုအပ်သူတွေ ဆီက လိုက်ဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ စာမေးပွဲကြီးကျင်းပနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲရက်အတွင်း ငွေစက္ကူတွေ အသိမ်းခံရတော့ ပိုက်ဆံပြတ်သူ ပြတ် ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့ ကျောင်သားတွေက အဆောင် အပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်။ ကျောင်းသား အချို့က ကျောင်းရှေ့ တိုင်လုံးကြီးတွေ အောက်မှာ ထိုင်သူထိုင် အချို့ကလည်း ကျောင်းအပြင် အင်းစိန်လမ်းမပေါ်က ပလက်ဖောင်းပေါ် ထွက်ထိုင်သူထိုင်နဲ့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောဆိုရင်း ဒေါသထွက်သူထွက် စိတ်ဓာတ်ကျသူကျ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်ထွက်ထိုင်နေတဲ့ ကျောင်းသား အချို့က ဒီငွေစက္ကူတွေ သုံးမရရင် ဘာလုပ်ရတော့မှာလဲ .. မီးရှို့ကွာ .. ဆိုပြီး စလိုက်ရာက လမ်းပေါ်မှာ ငွေစက္ကူ မီးရှို့ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မကျေနပ်မှုတွေက စတင်ပေါက်ကွဲထွက်လာပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ခန့် ကြာပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ သမိုင်းလမ်းဆုံဘက်က မောင်းလာတဲ့ မာဇဒါဂျစ် အစိုးရတံဆပ်တပ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့လုပ်အား ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနက ကားတစ်စီးက ကျောင်းသားတွေ အုပ်စုနားရောက်တော့ ရုတ်တရက် ကျွီကနဲ မြည်အောင် ဘရိတ်အုပ်ပြီး ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကားပေါ်က အရာရှိဖြစ်ဟန် တူတဲ့ လူတစ်ယောက်က ကားပေါ်က ဆင်းလာတာ အရက်မူးနေပုံပေါ်ပါတယ်။ ထိုလူက ဘီပီအိုင် လမ်းကြားထဲ ပြေးဝင်သွားပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေလည်း … ဒါ.. မ.ဆ.လ က ကားပဲကွာ .. ချကျ ရိုက်ကျ ၊ လူကိုတော့ မထိစေနဲ့ ဆိုပြီး ကားကို မီးရှို့လိုက်ကြပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ကျောင်းဝင်းထဲက ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦးက မော်ကွန်းထိန်းနဲ့ ပါမောက္ခများမှတဆင့် ပညာရေးဝန်ကြီးထံ တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်ပေးရန်၊ ငွေစက္ကူများ ပြန်လဲပေးရန် တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကတော့ ကျောင်းပိတ်ပေးပြီး ကျောင်းသားများကို နေရပ်ပြန်ပို့ပေးမယ် ဟု ဆိုလာပါတယ်။ ငွေစက္ကူ ပြန်လဲပေးရန်ကတော့ မဆလ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မလိုက်လျောနိုင်ပါဟု ဆိုပါတယ်။ ကျောင်းသားများလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၆) ရက်နေ့ မနက် ၂နာရီကျော်လောက်မှာ ဒဂုံမန်း၊ မြေလတ်သား၊ ရာမည စတဲ့ ဟီးနိုးကားကြီးတွေ အာအိုင်တီကျောင်းဝင်းထဲကို ၀င်လာပါတယ်။ အဆောင်ကျောင်းသားများကို ဘီဆောင် အဆောင်မှုး ဆရာဦးဘမြင့်က တစ်ယောက် ၂၀၀ ကျပ် ခရီးစားရိတ် ဆိုပြီး ထုတ်ပေးခဲ့ကာ ကျောင်းသားများကို ဘူတာ ၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်များမှ တဆင့် အိမ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ နယ်ဒေသတွေက အိမ်အပြန်လမ်းမှာ မဆလ အစိုးရအပေါ် မကျေနပ်ချက်တွေက ကပ်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်က ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းဆောင်နေ အဆောင်ကျောင်းသားတွေရဲ့အိမ်အပြန် မကျေနပ်မှုတွေနဲ့သာမန်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ငွေစက္ကူတွေ မတရားသိမ်းပိုက်ခံရလို့နေ့ စဉ်စားဝတ်နေရေးကအစ ချွေးနဲစာနဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ စုငွေလေးတွေပါ သုံးစွဲမရတော့လို့ပူဆွေးမှု အစိုးရအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းတံခါးဖွင့်သံ ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးသံနဲ့ အတူ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ လူနေမှုဒုက္ခ၊ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှု တွေက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့ပြန်တယ်။
ဒီလိုနဲ့၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ စနေနေ့ ညနေပိုင်း မှောင်ရီဖြိုးဖျ အချိန်မှာ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အင်းစိန်လမ်းမ တစ်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ စန္ဒာဝင်း လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲကို ကိုဝင်းမြင့် (၁)၊ ကိုဝင်းမြင့် (၂) နဲ့ ကိုကျော်စံဝင်းတို့ သုံးယောက် ပုံမှန် လဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်နေကျ အတိုင်း ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ စန္ဒာဝင်းလဘက်ရည်ဆိုင်ကလေးက ကျောင်းသားများအတွက် အနီးဆုံး ကျောင်းဝင်းပြင်ပ အပန်းဖြေစရာ မျက်စိပသာဒ နားအာဟာရအတွက် သာမန် ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကင်းတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်ကလေးပါပဲ။ ကျောင်းသား ၃ ယောက်နဲ့ အတူ သူတို့အကြိုက် အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ အခွေတစ်ခွေပါလာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းသားများက ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ကက်ဆက်ခွေတွေ ယူလာပြီး စန္ဒာဝင်းမှာ ဖွင့်ခိုင်းပြီး နားထောင်ရင်း အာလပသလာပ အတွက် အချိန်ကုန်နေကျပါပဲ။
အဲဒီနေ့မှာတော့ သူတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ကိုင်ဇာရဲ့ ချစ်တေးလှိုင်းကို ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် အခွေဆုံးအောင် သူတို့ စောင့်နေကြတယ်။ အခွေက နောက်တစ်ကျော့ ပြန်ရစ်နေတာနဲ့ သူတို့လည်း စားပွဲထိုးကောင်လေးကိုခေါ်ပြီး စိုင်းထီးဆိုင်ခွေ ဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲအချိန်မှာပဲ အခြားဝိုင်းက အရက်မူးနေသူ တစ်ယောက်က – စိုင်းထီးဆိုင်က အလကားပါကွာ.. မဖွင့်နဲ့ – ဆိုပြီး ထပြောတာ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျောင်းသား ၃ ယောက်လည်း ပြသနာ ဖြစ်မှာစိုး၍ ဥပေက္ခာ ပြုပြီး သူတို့ ကက်ဆက်ခွေကိုသာ ဖွင့်ပေးဖို့ ဆိုင်ရှင်ကို ပြောလိုက်တယ်။ အရက်မူးနေသူက ဆိုင်ရှင်ကို ထပြောတဲ့ ကိုဝင်းမြင့် (၁) ကို ရုတ်တရက် ခွေးခြေငယ်နဲ့ ခေါင်းကို ထရိုက်လိုက်တယ်။ ကျောင်းသား ၃ ယောက်နဲ့ ရပ်ကွက်သားများ ရန်ပွဲဖြစ်သွားရတယ်။ ကျောင်းသားများ ကျောင်းဝင်းထဲ ပြန်ပြေးလာပြီး ကိုဝင်းမြင့် (၁) ခေါင်းက ဒဏ်ရာများတဲ့အတွက် ဆေးခန်းပို့ ကြတယ်။ အင်းစိန်ရဲစခန်းကို သွားပြီး အမှုဖွင့်တော့ ရဲတွေက လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စစ်ချက်ယူကာ ကိုဝင်းမြင့် (၁) ကို ရိုက်တဲ့သူကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။
၁၉၈၈ ခု မတ်လ (၁၃) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်မှာ ဖမ်းဆီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့သူဟာ ရပ်ကွက်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ သားဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများ ကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့ ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီး ကျောင်းသား ၃၀ လောက် လူစုပြီး ရက်ကွက်ကောင်စီရုံးခန်းကို သွားအော်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက ကျောင်းသားများနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းသားများက ရုံးခန်းထဲဝင်ပြီး စားပွဲကုလားထိုင်များကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများလည်း ကျောင်းဝင်းတွင်းကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများ ပြန်လာပြီးနောက် ကောင်စီရုံးနားက သမ၀ါယမဆိုင် မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်က လူများက ကျောင်းသားတွေ မီးရှို့တယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲဒီနောက် စနေနေ့က ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ၃ ယောက် နဲ့ အခြားကျောင်းသားအုပ်စုက လဘက်ရည်ဆိုင် အနီးလမ်းဆုံမှ နေပြီး ရပ်ကွက်တွင်းလူများနဲ့ရန်ပွဲထပ်ဖြစ်ကာ ကိုဝင်းမြင့် (၂) ဓားနဲ့ထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ (ဒီ သမ၀ါယမဆိုင်ကို အာဏာပိုင်တွေက တမင်သက်သက် မီးရှို့ ဖန်တီးပြီး ရပ်ကွက်ကလူတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကို ရန်တိုက်ပေးခဲ့တာပါ)။
ကျောင်းသားများလည်း ကျောင်းကို ပြန်ပြေးပြီး လူစုကြပြန်တယ်။ လူစုပြီး ကျောင်သား ၂၀၀ ခန့် အုပ်စုကြီးက လဘက်ရည်ဆိုင်ဘက် လမ်းဆုံဆီကို ချီတက်ကြတယ်။ ရုတ်တရက် မမျှော်လင့်တဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုက ကျောင်းသားများကို စောင့်ကြို နေခဲ့ပါတယ်။ မီးသတ်ပိုက်တွေ အသင့်ပြင်ထားတဲ့ မီးသတ်ကားတွေက အသင့် စောင့်နေကြပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အင်းစိန်လမ်းပေါ်အရောက်မှာ ရပ်ကွက်သားတွေကို ရပ်ကွက်လူကြီးတွေက ထိန်းနေသလို ဆရာ ဆရာမများနဲ့ အဆောင်မှုးတွေကလည်း ကျောင်းသားတွေ နောက်ကိုလိုက်လာပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ မရမ်းကုန်း လမ်းဆုံဘက်မှ တက်လာသော ရဲချုပ်ကား၊ လုံထိန်းကားများ နဲ့ နိုင်းတူးနိုင်း ကားနက်ကြီးတစ်စီးတို့ ဟာ ကျောင်းသားများနဲ့ ရပ်ကွက်သားများအကြားကို ၀င်ရောက်နေရာယူလိုက်ပါတယ်။ ပညာရေး ဒု-၀န်ကြီး ဒေါက်တာမောင်ဒီ ကား နဲ့ တိုင်းရဲမှုး ဦးဖေကြည်ရဲ့ ရဲချုပ်ကားကတော့ ဘီပီအိုင်ဆေးဝါးစက်ရုံ လမ်းကြားထဲကို ဆက်ဝင်သွားပါတယ်။ ကားပေါ်က ၀တ်စုံပြည့် သံခမောက်၊ ဒိုင်းများ ၊ ဂန်းပိုက်များ၊ သေနတ်များ၊ တုတ်များနဲ့ လက်နက်အပြည့်စုံပါသော လုံထိန်းများက နေရာယူလိုက်ကြပြီး သေနတ်တွေ နဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ချိန်ထားလိုက်ကြပါတယ်။
ကျောင်းသား နဲ့ ရပ်ကွက်သားကြားက ရန်ပွဲရဲ့ ဒေါသမီးပွားက ကျောင်းသားနဲ့ လုံထိန်းကြားက ပဋိပက္ခ အသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများရဲ့ ဒေါသတွေက သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားတဲ့ လုံထိန်းတွေပေါ် ပုံသွားခဲ့တယ်။ ဆရာတွေက အနောက်ကနေ အော်ဟစ်သတိပေးနေတယ်။ ဆရာတွေရဲ့ အော်ဟစ် သတိပေးသံ မဆုံးခင်မှာပဲ သေနတ်တွေ မိုးပေါ်ထောင်ဖောက်လိုက်သံကို ဆက်တိုက်ကြားလိုက်ရတယ်။ မီးကျည်တွေလည်း မိုးပေါ်မှာ တဖောင်းဖောင်းနဲ့ ပစ်တင်လိုက်တယ်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ကျောင်းသားအုပ်ကြားထဲကို ပစ်သွင်းလိုက်တယ်။ ကျောင်းသားတွေရော ဆရာတွေပါ ကျောင်းဝင်းထဲ ၀င်ပြေးကြတယ်။ လုံထိန်းတွေက ကျောင်းဝင်းထဲ ပြေးဝင်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေနောက်ကို လိုက်ပစ်ပါတော့တယ်။
ပစ်ကွင်းထဲကို ၀င်လာတဲ့ ကျောင်းသား ၃ ယောက် လဲကျသွားတယ် အကြီးကျယ် ဒဏ်ရာ ရသွားတယ်။ ကိုဖုန်းမော် (ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား) ၊ ကိုစိုးနိုင် (စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား၊ ပုသိမ်)၊ ကိုမြင့်ဦး (စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ၊ ပြွန်တန်ဆာ) တို့ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရလိုက်တယ်။ ကျည်သင့်ပြီး လဲကျသွားတဲ့ ကိုဖုန်းမော်ကို ဆရာဦးသိန်းထွန်းအောင်က ၀င်ဆွဲတယ်။ ကိုဖုန်းမော်မှာ ဆရာဦးသိန်းထွန်းအောင် လက်ထဲမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရထားတဲ့ ကိုစိုးနိုင် နဲ့ ကိုမြင့်ဦး တို့ ကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ဒဏ်ရာ ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုတော့ ၀င်ဆွဲနိုင်ဖို့ မတတ်နိုင်ကြတော့ပါ။ တရစပ် ပစ်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ ကျောင်းသား ၂၀ ခန့် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေလည်း ကျောင်းဆောင်တွေထဲကို ခြေကုန်သုတ် ပြေးဝင်ကြရပါတယ်။
အတန်ငယ်ကြာတော့ သေနတ်သံတွေ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေလည်း အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဆရာတွေ နဲ့ အတူ ကိုဖုန်းမော် ၊ ကိုစိုးနိုင်နဲ့ ကိုမြင့်ဦးတို့ကို ဆေးရုံပို့ ဖို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးလည်း ငရဲပွက်တဲ့အလား ယမ်းငွေ့တွေ ဖုံးလွှမ်းခဲ့ရပါပြီ။
ကျောင်းသားများက ကျောင်းဆောင်တွင်းမှာ အရေးပေါ် တိုင်ပင်စည်းဝေးကြတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးထံသို့ အချက် (၇) ချက် တောင်းဆိုရန် သဘောတူကြတယ်။ အဲဒီ တောင်းဆိုချက်တွေကတော့ …. ကျောင်းဝင်းတွင်း ကျောင်းသားများအား ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းများမှ အမှန်တိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန်၊ သေဆုံးသွားသော ကျောင်းသားများနှင့် ဒဏ်ရာရကျောင်သားများ၏ မိသားစုများအား ထိုက်တန်သော လျော်ကြေးပေးရန်၊ သေဆုံးသွားသော ကျောင်းသားများအား နိုင်ငံတော်ဈာပန အခမ်းအနားဖြင့် ထိုက်တန်စွာ ဂုဏ်ပြုသင်္ဂြိုလ်ပေးရန်၊ ပတ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တရားခံ အစစ်အမှန်များကို အပြစ်ဒဏ်ပေးရန်၊ ကျောင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် တရားဝင် ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးရန်၊ ကျောင်းများ မပိတ်ရန်၊ ကိုဖုန်းမော်၏ ဈာပနကို ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကျင်းပခွင့်ပေးရန် စသည်ဖြင့် တောင်းဆိုကြခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်သား ၁၃ ဦးက ကျစ်လျစ်သော အမာခံသွေးသောက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး အသက်သေခံ တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒု-၀န်ကြီး ဒေါက်တာမောင်ဒီလည်း ကျောင်းကို ညတွင်းချင်း ပေါက်ချလာပြီး ကျောင်းသားများရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်တယ်။
စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတော့ ကျောင်းသားတွေ ပင်မ အဆောက်အဦးကြီးရှေ့မှာ ပြန်စုမိကြပြန်ပြီ။ ည ၁၂ နာရီ ထိုးတော့မယ်။ ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ကြမလဲ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး ကိုဖုန်းမော် သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့နေရာမှာ တော်လှန်ရေး ကြယ်ပွင့်လေးလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာက ကျောင်သားတွေ ဦးဆောင်ပြီး ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ပင်မ အဆောက်အဦး ရဲ့ သြဘာလမ်းထိပ်နေရာမှာ ကျောင်းတွင်း မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနကရှိတဲ့ ဘိလပ်မြေ အုတ်ကျိုးလေးတွေ နဲ့ ကြယ်ပွင့်လေး စတင် တည်ဆောက်လိုက်တယ်။ တစ်ကျောင်းလုံးအနှံ့လိုက်ပြီး သေနတ် ကျည်ဆံခွံတွေ၊ မီးကျည်ခွံတွေ ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးခွံတွေ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ မီးပေါက်ရာ အ၀တ်အစားတွေ၊ သွေးစွန်းနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို လိုက်ရှာ စုဆောင်းပြီး ကြယ်ပွင့်ထဲကို စုထည့်ကြတယ်။ နောက်တော့ ကျောင်းသားတွေက စွယ်တော်ရွက်တွေကို ဆေးလိပ်မီးနဲ့ တို့လို့ အပေါ်က ဖြန့်ကြဲပြီး ကြယ်ကို ပိတ်လိုက်ကြတယ်။
ကျောင်းမှာ ဖွေးဖွေးလှုပ်အောင် ပွင့်နေတဲ့ စွယ်တော်ပွင့်တွေနဲ့ ပန်းခွေတွေလုပ်ပြီး ကျောင်းသားတစ်ယောက်က လက်ဝဲစာလုံးနဲ့ ကိုဖုန်းမော် နာမည်ကို ရေးပြီး ပန်းခွေမှာ ကပ်လိုက်တယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အံကြိတ် တောက်ခေါက်သံတွေ၊ ကျောင်းနံရံကို ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ပြီး အော်ဟစ် ငိုကြွေးသံကိုလည်း ကြားနေရတယ်။ ကျောင်းသားအချို့လည်း လမ်းမပေါ်မှာ ဒူးထောက်ချ ပန်းခွေတွေရှေ့မှာ ဦးစိုက်ပြီး ငိုကြွေးနေတာကိုလည်း တွေ့နေရတယ်။ မနက် ၅ နာရီ ၂၅ မိနစ်မှာ တိတ်ဆိတ်စွာ ကျောင်းကို တစ်ပတ်ပတ်ပြီး ကြယ်ပွင့်ရှေ့မှာ ပန်းခွေချ အလေးပြုခဲ့ကြတယ်။ မတရားပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်မှုအတွက် အလျှော့ပေးလို့ မဖြစ်တော့ဟု ခံပြင်းပြီး ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရထားတဲ့ ကိုစိုးနိုင် နဲ့ ကိုမြင့်ဦးကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို သီးသန့် လူနာခန်းမှာ ထားပါတယ်။ အခန်းဝမှာ ရဲတွေ စောင့်နေပါတယ်။ ကိုစိုးနိုင် တို့ကို ဒဏ်ရာတွေ ပြင်းထန်စွာရထားတဲ့ကြားက ကုတင်တိုင်တွေမှာ ခြေတွေလက်တွေကို သံကြိုးတွေနဲ့ ချည်ထားပါတယ်။ ကိုစိုးနိုင်မှာ အသဲထဲသို့ ကျည်ဆံဝင်သွားပြီး ကိုမြင့်ဦးကတော့ ၀မ်းဗိုက်နဲ့ ဆီးအိမ်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသရန် ဆရာဝန်များ တင်ပြတာကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ကျည်သင့် ဒဏ်ရာရထားသော အခြား ကျောင်းသား ၆ ယောက်ကိုလည်း လက်ထိပ်ခတ်ပြီး လှိုင်ရဲစခန်းကို ခေါ်သွားတယ်။ ၄ ယောက်က သတိလစ်နေတယ်လို့ သိရတယ်။
ည (၈) နာရီ သတင်းမှာတော့ အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားမှု အကြောင်းကို သတင်းထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့သည်မှာ “ကျောင်းသားများ ဆူပူမှုကြောင့် တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူ့ရဲများက ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ ကျောင်းသားများကို ဆွေးနွေး၍ အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရကြောင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို နှောက်ယှက်ဆူပူ ကြသူများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း” မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတော့သည်။
ဤသို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သော အာဏာရှင်လူသတ်သမားတို့ ၏ သွေးဆာသော လက်နက်ဖြင့် ရိုင်းစိုင်းစွာ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင်တို့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပြီး ကျောင်းသားထု၏ သွေး မြေကျခဲ့ရသည့် မတ်လသမိုင်းအား မည်သို့ မျှပင် မေ့ပျောက်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
(မပျိုပျိုမေ၏ ဖေါ်ပြချက်များကို အခြေခံ၍ ပြန်လည်ရေးသားဖေါ်ပြအပ်ပါသည်)။